Manchester United oo lumisay xiisaha ay u qabto Antonio Conte | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester United oo lumisay xiisaha ay u qabto Antonio Conte
Manchester United oo lumisay xiisaha ay u qabto Antonio Conte
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qaboojisay xiisihii ay u qabtay Antonio Conte, sababa la xiriira qarashka ay ku soo qaadaneyso kooxda reer Talyaani.
Tababaraha reer Talyaani ayaa si xoogan loola xiriiriyay doorka maamule ee Old Trafford, iyadoo tababaraha haatan ee Ole Gunnar Solskjaer uu saaran yahay cadaadis daran xilli uu qaab ciyaareed liita ku jiro.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Daily Star , kooxda heysata 20-ka jeer ee Ingariiska ayaa si degdeg ah u lumineysa xiisaha Conte, sababtoo ah Qiimaha 52-sano jirka ugu soo biirayo kooxda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in tababarihii hore ee Chelsea uu doonayo heshiis ku kacaya 18 milyan ginni xilli ciyaareedkii ilaa June 2025, halka uu dalban doono inuu keeno shaqaale u gaar ah, taasoo la micno ah in tababarayaasha Man United Michael Carrick , Mike Phelan iyo Kieran McKenna ay dhamaantood ku qasbanaan doonaan. inay baxaan
Conte ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu dalban doono Red Devils in ay la soo saxiixdaan xiddig khadka dhexe ah iyo daafac dambeedka cusub inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga January si uu ugu ogolaado in uu u wareego 3-5-2.
Previous articleBeesha caalamka oo war kasoo saartay doorashadii ka dhacday Puntland (Aqriso)
Next articleSilvestre oo soo bandhigay Waxa uu u baahanyahay Solskjaer si uu u sii hayo shaqada Man Utd
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa barbardhigay Cristiano Ronaldo iyo halyeeyga kubbadda koleyga Michael Jordan ka dib markii uu daawado goolkii Portugal...
Barcelona 3-3 Celta Vigo, Barca oo laga Bar-bareeyay Saddex Gool oo...